Nhau - Musiyano wedziviriro yezvakatipoteredza hombe yekusanganisa chirimwa
Musiyano wedziviriro yezvakatipoteredza hombe yekusanganisa chirimwa
Nekufambira mberi kwenzanga uye kusimudzira kwesainzi uye tekinoroji, nyaya dzekuchengetedza nharaunda dzakakwezva zvakanyanya kutarisisa. Mushure memakore ekushanda nesimba, iyo yakasikwa-inoshamwaridza yakakura-musanganiswa yekusanganisa chirimwa yakawana yekutanga mhedzisiro, uye ayo akasarudzika maitiro ndeaya anotevera:
1. Kudzora kubvisa zvinosvibisa masosi
Control Guruva kudzora. Iyo inochengetedza zvakatipoteredza-inoshamwaridzika pamwero mukuru kusanganisa chirimwa inotora inoenderana guruva muteresi kuti iite yega girazi kuunganidza, uye otomatiki pinda iyo inounganidzwa guruva mune yekugadzira sisitimu yekushandisa metering, ichideredza yechipiri kusvibiswa kweguruva; mishonga yekumwaya inogadzirirwa mujecha uye negiraidhi yadhi kudzikisa mashandiro ejecha nejecha Guruva.
Kucheneswa kwemvura yemvura. Iyo inovhenekera-inoshamwaridzika yakakura-chiyero inosanganisa chirimwa yakagadzirirwa nejecha-mavhu akaparadzanisa uye slurry yemvura yekudzokorora system. Iyo yakasviba mvura uye marara zvakasara zvinogadzirwa kubva mukushanda kweyekusanganisa chiteshi zvakaparadzaniswa nejecha uye mavhu mushure mejecha-mavhu akaparadzanisa. Re-pinda iyo yekugadzira mvura sisitimu kuti uwane zero kubuda kwemvura yakasviba nemarara emarara.
Kudzora ruzha. Iyo inochengetedza zvakatipoteredza-inoshamwaridzika yakakura-mikuru yekusanganisa chirimwa inotora yunifomu mavhu ekuvharisa system kudzikisa mota simba uye ruzha; chiteshi chose chinotora yakaderera-ruzha mota system kudzikisa kukanganisa kweruzha pane zvakatipoteredza. Midziyo yeVibration nemimwe michina yakabatana nemapads ekudedera kudzikisa ruzha rweVibration.
2. Cheka nzira yekufambisa
Nzira inoshanda kwazvo kune zvakatipoteredza-zvine hushamwari mikuru-inosanganisa zvirimwa kuti ichekese hutachiona hwekusvibisa ndeyekuvhara chiteshi chose. Iyo encapsulation inobvisa zvakanaka sosi yekusvibisa kubva kunharaunda yakatenderedza uye inodzora zvinosvibisa munzvimbo isina kukwana, nokudaro zvichideredza kukanganisa kwenzvimbo.
Runako ndicho chinhu chekutanga chinodiwa kune zvakatipoteredza - zvine hushamwari pamwero mukuru wekusanganisa chirimwa. Muchidimbu, zvinogona kutaurwa kuti inovhengana-inoshamwaridzika nharaunda simiti fekitori yemazuva ano inosanganisa zvakakwana tekinoroji yekusanganisa, tekinoroji yekudzivirira kwezvakatipoteredza uye hunyanzvi hwekuvaka. Chimiro chechiteshi chose chine pfungwa yekunaka, chinoenderana nenzvimbo dzakatenderedza, uye kuronga kune musoro.
Mukupfupisa, iyo yakasikwa-inoshamwaridzika yakakura-mizinga yekusanganisa chirimwa ine mhedzisiro mikana uye yakasarudzika. Changli yakazvipira kutsvagisa nekusimudzira kwezvitsva zvitsva zvekusanganisa zvidyarwa kwemakore mazhinji, zvichitora kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza sebasa rayo, uye zvabuda. Kana iwe uchida kubvunza uye kutenga,
Concrete chisanganiso Spare Zvikamu, Aggregate Batching System, Otomatiki Aggregate Batching System, Otomatiki Aggregate Batching Machine, Automaticaggregate Batching Fertilizer Chisanganiso, Aggregate Batching Dosing Sisitimu,